नयाँ नेपाल निर्माणको एउटा सपना देखिरहँदा म हृदयदेखी सम्झना चाहन्छु यो देशमा म एउटा मानिस खोजिरहेछु भन्ने राष्ट्रिय गीतलाई एक पटक ।
यो देशमा एउटा मानिस खोजिरहेछु
गीतकार तथा संगीतकार बिश्वनाथ वराल प्रेमले रचना र संगीत दिनुभएको तथा गायक शिशिर योगीले गाउँनु भएको राष्ट्रिय भावनाले ओतप्रोत उत्कृष्ट राष्ट्रिय गीत सच्चा देशभक्त नेपालीको नशानशामा रगत संगसंगै बग्छ । यो राष्ट्रिय गीतले देशको राष्ट्रियता, स्वाधीनालाई जोगाउने देशभक्त दुरदर्शी नयाँ राजनीतिक शक्तीलाई हाक्ने साहसी, परम प्रतापी महान मानव नेपालको छोरोको परिकल्पना गरेको छ । जसले शक्ति सत्ता पाउदा पनि त्यसको दुरुपयोग नगरोस, महेन्द्र मल्ल जस्तो अरुको दुखलाई आफ्नै दुख सम्झिीयोस । खाचो छ हाम्रो मातृभुमिलाई राजनेताको । बिश्वको ब्यबहारिक सत्य कुरा नेता दुरदृष्ठी र पथप्रदशक हुनैपर्छ । नयाँ नेपाल निर्माणको सपनाको ढोका खोल्दै काठमाडौं उपत्यकाको सडक बिस्तार गरी पुरै शहरको मुहार फेरेकोमा पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको योगदानलाई सलाम । नेपालमा बलियो इच्छाशक्तियुक्त प्रतिबद्ध र जुझारु साहसी राजनीतिक नेतृत्वको आवश्यकता हुन्छ । साच्चै देशको माया गर्ने यौटा महान् युगपुरुष (देशभक्त राजनेता) खोजी रहेछु । नेपालको मुहार फेर्न पूर्व प्रधानमन्त्री केपी ओलीले जे सपना देखे त्यो एकदमै सान्दर्भिक र प्रशशनीय थियो, छ र हुनेछ । उनमा यो माथिको राष्ट्रिय गितले खोजेको युगपुरुषको केहि गुणहरु देखिएको छ ।
नेपालको इतिहासलाई फर्केर हेर्दा यो देशमा कुनै पनि शक्तिले आफ्नो सांम्राज्य खडा गर्न सके न कुनै संम्राज्यबादी शक्तिहरूसंग घुडा टेक्न बाध्य हुनुपर्याे । एसियामा कसैको पनि उपनिवेश नभएको दुई देशमध्ये नेपाल र थाइल्याण्ड हो। त्यसैले नेपालको गर्विलो इतिहास विश्वसामु उपस्थित छ । हाम्रो देश नेपालमा अव्राहम लिङ्कन, महात्मा गान्धी र नेल्सन मण्डेला जस्ता महान् व्यक्तित्वहरूको खाँचो छ । डा. महाथीर विन मोहम्मद, वाराक ओबामा जस्ता प्रतिभाशाली नेताको जन्म हुनुपर्ने अत्यन्तै आवश्यक छ नेपाल आमालाई । यतिमात्र होइन अल्र्वट आइन्स्टाइन, कार्ल माक्स, विलियम शेक्सपियर, लियोनार्दो दा भिञ्ची, मदर टेरेसा, मेडम क्यूरी, अव्राहम लिङ्कन, महात्मा गान्धी र नेल्सन मण्डेला जस्ता महान् व्यक्तित्वहरूको पनि आवश्यक पर्दछ । आधुनिक मलेसिया निर्माता डा. महाथीर विन मोहम्मदको सवल नेतृत्वदायी भूमिकाबाट मलेसिया आर्थिक विकासको लागि मार्ग प्रशस्त गराए । आधुनिक सिङ्गापुरका जन्मदाता ली कुआन युकै गतिशील नेतृत्वका कारण सिङ्गापुरको विकासमा तीव्र रूपान्तरण भएको हो । विश्वका महान् राजनेताहरू महात्मा गान्धी, अव्राहम लिङ्कन र नेल्सन मण्डेलाले आफ्नो देशको लागि दिइएको महत्वपूर्ण योगदानलाई विश्वले अनन्तकालसम्म स्मरण गरिरहने छ ।
हान् वैज्ञानिक आन्इस्टाइनका अनुसार ज्ञानभन्दा कल्पनाशक्ति धेरै शक्तिशाली हुन्छ किनकि ज्ञान सीमित छ, तर कल्पनाशक्ति असीमित हुन्छ । महाकवि लक्ष्मिप्रसाद देवकोटाले उद्देश्य लिनु के उडी छुनु चन्द्र एक भनेको केही समयपछि मात्र निल आर्मस्ट्रङ चन्द्रमामा अवतरण भए । सोच नै कुनै सफलताको आधार अवश्य हो । दार्श्निक जी बद्रीलार्ड आफ्नो कृति ‘द सिमुलाक्रम’मा सोच व्यवहारभन्दा कैयौं गुणा शक्तिशाली हुन्छ भन्ने मान्यता राख्छन । विश्वका सफल व्यक्तिहरु भन्छन सपना देख, असफल व्यक्तिहरु भन्छन धेरै सपना नदेख । सपना देख्नुपर्छ, उदेश्य राख्नुपर्छ तर त्यस अनुसार कार्य सम्पादन गनुपर्दछ ।
विकास त्यहीँबाट सुरु हुन्छ, जसले सपनालाई विपनामा बदल्न खोज्छ । जसले सपना देख्दैन, सपनालाई विपनामा परिणत गर्न चाहँदैन र सपना देखे पनि त्यसलाई केलाउने प्रयत्न जसले गर्दैन, त्यो मान्छे मूर्ख शिवाय केही हुन सक्दैन । हामी हाम्रो जीवनकालमा ३ भागको १ भाग सुतेर बिताउँछौं भने ६ वर्ष जति सपना देखेर । हाम्रो हरेक रातको औसत २ घण्टा सपनामा बित्छ । मानव मस्तिष्क र पशुपंक्षीको मस्तिष्कको बिचको अर्को एउटा ठुलो भिन्नता के पनि हो भने पशुपंछीलाई मैले सपना देखें भन्ने कुरा पनि थाहा हुँदैन, निद्रा खुलेपछि सपना नै पूर्णत बिर्सिहल्छन, र प्रभाव पनि शुन्य हुन्छ ।
गीत – यो देशमा म एउटा मानिस खोजिरहेछु
गायक – शिशिर योगी
गीतकार तथा संगीतकार – डा. विश्वनाथ बराल ‘प्रेम’
छाडेर काम सारा एक काम खोजि रहेछु
भेटे कहीं बताए हे राष्ट्रका बटोही
रक्ष्यार्थ जन्मेका छन् की सपुत कोही
यो प्रश्न ख्याल राखे सबलाई सोधी रहेछु
यो देशमा म एउटा मानिस खोजि रहेछु
आमा यदि नबाचे कसको प्यार पिउने
कुन काखमा रमाउने कसका निमित्त जिउने
मुर्छित मातृभूमि को प्राणको हरणमा
यो बिषको घडा जो पिउने छ ति रढमा
त्यस्ता परम् प्रतापी त्यस्ता अजय नायक
अवतार भएर मानौ भुभार हर्न लायक
म त्यही महान मानवको मार्ग खोपी रहेछु * २
यो देश मा म एउटा मानिस खोजि रहेछु
यो मूल घर ढलेमा ठाउँ कहाँ छ जाने
होला कुनै त बाटो जोडेर साथ लाने
पाएर शक्ति सत्ता गर्दैन जो कुकर्म
आफ्नै शरीर अरुको जो बुझ्छ भित्रि मर्म
संचेतना जगाई यो देश माथि लाने
आशा र उन्नति को दृष्टि दिएर जाने
म त्यही नयाँ भविष्यको बिज रोपी रहेछु *२
यो देशमा म एउटा मानिस खोजि रहेछु *२
उक्त गीतको अडियो सुन्नको लागि तलको लिंक क्लिक गर्नुहोला
← विजया दशमी २०७४ को हार्दिक मंगलमय शुभकामना